Akụkọ - Pets Pump Well Pump na-enweta nke ọma site na EVOMEC
6 Sets Well Point Pump Na-enweta nke ọma site na EVOMEC
Tongke Flow wetara 6 usoro nke ọma ebe mgbapụta setịpụrụ maka EVOMEC na 2019. Ọ bụ abụọ wiil ibughari ụdị akọrọ onwe priming mmanụ dizel ụdị. Dị mgbapụta: SPDW150, Ike: 360m3 / h, Isi: 28 m, yana yana akụkụ ọkpọkọ na ebe dị mma. EVOMEC bụ onye ndu na injinia ọtụtụ, nrụpụta na ọrụ mmanụ na gas nwere oke ọrụ enweghị atụ iji dabaa ogo nke ọrụ anyị na oke ọrụ anyị na ọrụ ọ bụla ma ọ bụ na ala ma ọ bụ n'oké osimiri. Ha nwere ndi otu engineer na ndi okacha amara ma anyi nwere obi uto isoro ha.
Banyere oke egwu ụwa zuru oke, anyị enweghị ike izipu ndị injinia maka ọrụ mpaghara. Mgbe mgbalị nke ndị ọzọ na nkwukọrịta n'ịntanetị. Anyị edozila nsogbu ahụ ọkụ ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ dị oke elu n'okpuru ọnọdụ ọrụ ọnọdụ okpomọkụ dị elu.
Obi dị anyị ezigbo ụtọ na mgbapụta ahụ na-arụ ọrụ nke ọma wee nweta akwụkwọ ozi maka obi ụtọ:
"Enweela m ike ịtọ mpaghara isii niile wee nwalee 3 n'ime ha nke na-arụ ọrụ nke ọma !! (vidiyo na foto na-abịa n'oge adịghị anya).
Enwere m ekele maka onye ọ bụla n'ime unu nke gafere kilomita iji nweta ihe ndị a. Daalụ nke ukwuu!
Dika amara ngwa, ihe oma (nzacha) ebe ezubere ha, azutara m ihe nzacha ohuru iji wugharia ha (foto ndi etinye) na ndi ozo iji otu.
Aga m achọ ịzụta akụkụ ụfọdụ dịka injectors / nfuli moto, ihe mmetụta, ndị na-akụ ọkụ wdg. Na nke a, Co nwere ike izipu m akụkụ / akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ akwụkwọ ọ bụla nwere ike inyere aka nwee ike ịmata akụkụ ziri ezi ya. "
Daalụ maka ezi obi na ntụkwasị obi ndị ahịa, anyị ga-aga n'ihu na-agba mbọ ịnye ndị ahịa ngwaahịa na ọrụ dị mma.